crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Ra’isul wasaaraha Kanada oo soo dhaweeyey qaxooti Siiriyaan ah | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka December 11, 2015	0 386 Views
Muqdisho (Himilonews) – Ra’iisul wasaaraha cusub ee Kanada Justin Trudeau ayaa maanta ku soo dhaweeyey tiro gaaraya 163-qaxooti oo hor dhac ka ah 25,000 qaxooti Siiriyaan ah oo lagu keenay diyaarad militari magaalada Toronto.
Tiradan qaxooti ayaa barakac ku ahaa gudaha dalka Lubnaan kahor intaan la keenin Kanada.
Dowladda cusub ee Trudeau ayaa horay u qaadaysa balan-qaad ay dib u dejin ugu sameyneyso tira qaxooti Siiriyaan ah oo gaaraya 25,000.
Tani ayaa hadaba kusoo beegmeysa kadib hadalkii uu jeediyay musharaxa xisbiga Republican-ka Donald Trump oo ku aadanaa in gudaha Maraykanka laga mamnuuco Muslimiinta–taas oo sababtay dibad-baxyo ka dhan ah oraahdiisa inay bilowdaan.
Previous: Markay madaxdu Nadaafadeynta Muqdisho u istaagaan
Next: Muslimiinta UK oo gargaaray Caddaan Biritish ah
Nin is-gubay markii saf bangi uu ku dheeraaday!